Dịkwuo Chrome Nchọgharị Speed ​​na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi melite ọsọ nke Google Chrome na gam akporo
You chọpụtala na ihe nchọgharị Google Chrome gị na-akpa ike nwayọ nwayọ na gam akporo? Ọfọn, ọ bụrụ na ọ bụ nkasi obi ọ bụla, anyị kwesịrị ịkọwa ya Anomaly a abughi nani ihe kariri ekwenti na sistemụ arụmọrụ dị etu a kamakwa, kọmputa nkeonwe ebe ekwupụtala ihe nchọgharị Internetntanetị.
Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ na Windows PC, nsogbu ahụ nwere ike ịdị obere karịa na sistemụ arụmọrụ ahụ anyị ga-enwe ike ịhọrọ ihe nchọgharị browserntanetị ọ bụla ọzọ iji rụọ ọrụ; dị mwute ikwu na otu bụrụ na-apụghị welite na mobile ngwaọrụ na gam akporo sistemụ ruru ka na-atụ egwu na ọtụtụ mmadụ nwere banyere nkwụsi ike nke ihe nchọgharị ndị ọzọ. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị wụnye Google Chrome na gam akporo ekwentị mkpanaaka gị na ọ na-enwe dịtụ nwayọ omume, mgbe ahụ, anyị ga-ekwupụta ihe kpatara enwere ike ịmepụta mgbaàmà ọrịa a yana ihe ngwọta ị kwesịrị ịnwe iji dozie nsogbu a.
1 Gini mere Google Chrome ji agba oke na Android?
2 Kedu ihe anyị kwesịrị ịme iji dozie nsogbu Google Chrome a na gam akporo?
Gini mere Google Chrome ji agba oke na Android?
Azịza dị irè bụ nke anyị ga-enwe ike ikwubi ozugbo anyị kwubiri na aghụghọ anyị ga-ekwu n'okpuru; ke ofụri ofụri, anyị nwere ike ikwu na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo nwere obere RAM, Nke a bụ isi ihe kpatara ihe nchọgharị tontanetị na-eji nwayọ nwayọ.
Google Chrome na-eri ọtụtụ usoro sistemụ arụmọrụ, ọ bụ ezie na RAM bụ isi emetụta ma na ngwaọrụ mkpanaka ma na kọmputa nkeonwe. Tụle nke ahụ nke ikpeazụ a nwere ike inwe ebe nchekwa RAM karịrị 8 GB Ọ bụrụhaala na ụlọ ha na-akwado ya, otu ọnọdụ enweghị ike ịnwe na ngwaọrụ mkpanaka, ebe ọ bụ na ebe ahụ ụfọdụ njedebe dị elu nwere ike ịnwe karịa 3 GB.
Kedu ihe anyị kwesịrị ịme iji dozie nsogbu Google Chrome a na gam akporo?
Mgbe ahụ, anyị ga-ekwupụta ntakịrị aghụghọ anyị na-atụ aro na mbido, nke ga-enyere anyị aka mezie nsogbu (ikwu okwu) na Google Chrome nwere ike igosi ihe gbasara nchọgharị Internetntanetị; Ọ bara uru ịkọ na aghụghọ a nwekwara ike ịnakwere na nsụgharị maka kọmputa nkeonwe, ọ bụ ezie na oge a anyị nwere mmasị na idozi nsogbu ọsọ ọ bụla na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo.
Ọ bụrụ na ibudata Google Chrome maka gam akporo, anyị na-atụ aro gị mee ya na njikọ Google Play Store; Ozugbo ịmechara, ngwa ahụ ga-etinye aka na njedebe ya na akpaghị aka.
Mgbe ị na-agba ya, ị ga-enyerịrị ụfọdụ ikikere nnweta na akaụntụ Gmail gị, n'agbanyeghị na ịnwere ike izere ọnọdụ a ma ọ bụrụ na ịchọghị ịme ya n'oge ahụ. Na adreesị mmanya ị ga-ede ihe ndị a:
Na nzaghachi, windo ịdọ aka ná ntị ga-apụta ebe Google Chrome na-atụ aro ka ị kpachara anya n'ụdị ụdị ọ bụla ị ga-esi gbanwee na nhazi a. Enweghị ụjọ ọ bụla, anyị na-akwado ka ị gaa n'akụkụ etiti nke windo nke ị ga-ahụ onwe gị ugbu a, ma gbalịa ịchọta nhọrọ ọzọ.
Njide ahụ anyị debere n’elu akụkụ bụ ebe ị ga-aga; a na-etinye oke ya na nhọrọ "ndabara", ihe anyị ga-agbanwe maka oge ahụ site na imetụ ya aka. Ozugbo a ga-egosipụta nhọrọ ole na ole na ebee, iji ihe RAM eme ihe bụ ihe anyị kwesịrị ịhọrọ n'oge a. Ọ bụrụ na ngwaọrụ mkpanaka gị dị obere na RAM, ọ ga-adị mma ma ị gbalịa iji ihe dị 512 MB.
Mgbe ị na-ahazi oke a na ụdị RAM, ị ga-eme ka ị kwụsị ojiji ya, yabụ, ị ga - egbochi Google Chrome iwepu ebe nchekwa karịa ka ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na i lee nseta ihuenyo nke anyị tinyere n'elu, ị ga-achọpụta na enwere ike ijikwa oke a n'otu ụzọ ahụ na nyiwe ndị ọzọ, nke gụnyere Windows, Linux ma ọ bụ Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi melite ọsọ nke Google Chrome na gam akporo
Etu esi emepụta ozi ọkọlọtọ na Gmail
Olee otú ike ngwa akpa nchekwa na iOS 8